Tudor biliri, ihe nnọchianya nke England | Njem zuru oke
La Tudor Rose (mgbe ụfọdụ a na-akpọ Union rose ma ọ bụ naanị Igbo Rose) bụ akara njiri mara mba nke England ebe ọ bụ na ngwụcha Middle Ages. Ifuru a na - ewe aha ya Udlọ Tudor, usoro ndị eze jikọrọ ụlọ ndị mara mma nke Lancaster na York.
Na ọta ọdịnala nke England, a bilie pụtara na-anọchi anya ya na-acha ọcha petals (nke na-anọchi anya thelọ York) na ise ọzọ na-acha uhie uhie (maka nke Lancaster). Agbanyeghị, n'ụwa nke ifuru ifuru, Tudor rose bụ pink, hue nke sitere na ngwakọta nke uhie uhie na ọcha ọcha.
1 Mbido akụkọ
2 Tudor bilie: akara nke England
3 Osisi dị anya site na England
Tudor rose nwere ụgwọ ihe atụ dị ike dịka ọ na-anọchite anya njedebe oku Agha nke Roses, agha ahụ busoro ezinụlọ abụọ ndị kasị nwee ike ịlụ agha n'England agha na narị afọ nke XNUMX.
Agha ahụ biri na mmeri nke Henry nke Lancaster na Agha nke Bosworth Field (1485). Onye mmeri kwuputara na ya bu eze na aha Henry nke Asatọ, ọ bụ ezie na mgbe otu afọ gasịrị, ọ lụrụ dị ka nwunye ya Elizabeth nke York, si otú a na-eme ka ezinụlọ abụọ ahụ bụrụ otu ma na-eme ka ihe dịghachi ná mma. Iji kọwaa ịdị n'otu ọhụrụ a n'otu akara, agba agba abụọ (mechara pink rose) nakweere, nke site n'oge ahụ gaa n'ihu ga-amata Tudor rose ma ọ bụ otu bilitere.
E wezụga akụkọ ihe mere eme, akụkọ ihe mere eme na-egosi na n'oge agha Bekee na-agba ọbara naanị akara nke ọcha ọcha dị, nke Houselọ York ji mee ihe. O doro anya, acha ọbara ọbara uhie nabatara mgbe njedebe nke esemokwu ahụ maka naanị nzube nke ịmepụta akara ọhụrụ. Usoro mgbasa ozi nke oge iji kwado ịdị n'otu mba ọhụrụ wee mechie ọnyá ochie.
Tudor Rose, nsonaazụ nke njikọta n'etiti ihe nnọchianya nke thelọ Lancaster (acha uhie uhie) na oflọ York (ọcha ọcha).
Kemgbe ahụ, n'akụkọ ihe mere eme England niile Tudor rose nọchiri anya n'ụzọ dịgasị iche iche. Mgbe ụfọdụ dị ka a okpukpu abụọ, ndị ọzọ na- otu n'ime Roses karịrị na nke ọzọ na, ọzọ mgbe, dị ka otu gwakọtara bilie. Ihe nnọchianya nke rose nke okpueze toro bụ ihe a na-ahụkarị, dị ka ihe nnọchianya nke ọchịchị ndị Britain dị n'otu.
Tudor bilie: akara nke England
Taa, a na-ewere Tudor rose akara ngosi nke England, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke United Kingdom. N'ikwu eziokwu, mba nke ọ bụla nke mejupụtara mba ahụ na-eji akara nke aka ya: Ido Scotland nwere ogwu, Wales leek e North Ireland shamrock, nke bụkwa akara nke Republic of Ireland.
The Tudor bilie hụrụ na ukara akara nke ẹkekpemede nke Tower nke London na ndi nche eze-nwanyi. Ọ pụtakwara ọtụtụ afọ na agbara nke Mkpụrụ ego pence 20. N'ezie, ọ bụkwa oche ndị uwe nke ogwe aka nke United Kingdom na nke Ụlọikpe Kasị Elu si na mba a.
Na mgbakwunye na nke a, Fans nke rugby ha maara nke ọma na njikọ ahụ bilitere dị na uwe elu nke ndị egwuregwu nke ndị otu egwuregwu England.
Ndị na-egwu egwuregwu otu egwuregwu rugby nke bekee, nwere rose na obi
Ọtụtụ obodo na obodo Bekee ji mpako na-eyi Igbo Rose na akara mpaghara gị. Otu n’ime ndị kacha mara amara bụ Sutton Coldfield, nke dị nso na Birmingham, nke Henry nke Asatọ n'onwe ya nyere ọnọdụ nke Ciudad Real. Tudor bilitere na uwe nke ogwe aka nke obodo mahadum Oxford.
N'otu aka ahụ, ekwesịrị ịdeba ama na ejiri rose na akwụkwọ niile na saịtị nke Touristlọ ọrụ ndị njem nleta nke England (NletaEngland), n'agbanyeghị na e nwere otu ihe mmebe.
Osisi dị anya site na England
Ma ama n'otu ama ada ada pụtara na ebe ndị ọzọ na-adịghị anya England. Dịka ọmụmaatụ, ógbè na mpaghara nke Quemụ nwanyị dị na New York City, wears a Tudor bilie na ya ọkọlọtọ na ukara akara. Ọzọkwa ọkọlọtọ nke Annapolis na Maryland, Njirimara a Tudor bilie n'akụkụ a Scottish thistle, ma topped a okpueze.
Na-ahapụghị United States, e nwere ihe ọzọ ịmata banyere akụkọ ihe mere eme na mpaghara ala dị na steeti South Carolina. N'ebe ahụ, anyị nwere ike ịhụ obodo a na-akpọ York, a maara dị ka «obodo nke ọcha ọcha». Naanị kilomita 50 site na, na -aga ndịda ọwụwa anyanwụ ma na-ahapụ steeti ahụ, e nwere obodo ọzọ nwere aha Lancaster. Na aha otutu nke obodo a bu, “obodo uhie uhie.”
N’ikpeazụ, anyị nwekwara ike ịchọta Tudor biliri na uwe nke ogwe aka nke Canada, akụkụ nke oge ọchịchị ndị Britain nke diri ogologo oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Tudor biliri, ifuru mba England